Saynisyahannada ayaa dib ugu soo celiyay aragtida ku jirta jiirka indhaha markii ugu horreysay! (Daraasad)
Saynisyahannada ayaa dib ugu soo celiyay aragtida ku jirta jiirka indhaha markii ugu horreysay!
21 / 07 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles/av waxyeelladayda
Guul layaableed oo cilmi baaris ah oo la xiriirta daaweynta gulukooma, oo si fiican loo yaqaan gulukooma, iyo cilado kale oo muuqaal ah oo saamaynaya neerfaha optic-ga.
Daraasadda, ayaa lagu daabacay joornaalka cilmi-baarista Nature Neuroscience, wuxuu sharraxayaa sida ay saynisyahannadu markii ugu horreysay awood ugu soo celinayeen howlihii muuqaalka ahaa ee muuqaalka ahaa ee jiirka ee indha la’aa la xiriirta la'aanta dareemaha ka dhexeeya indhaha iyo maskaxda.
Dib u soo nooleynta dareemayaasha dhaawacmay iyo kuwa maqan
Cilmi-baarayaashu waxay 'khiyaaneeyeen' fiilooyinka neerfaha ee indhaha - dareemayaasha xanbaarsan macluumaadka muuqaalka isha illaa maskaxda - si ay isu hagaajiyaan. Waxay sidoo kale ogaadeen in fiilooyinka neerfaha kaliya aysan dib u soo cusbooneysiin, laakiin ay sidoo kale raaceen isla dariiqa neerfaha ee ay jiifaan ka hor inta aysan waxyeello gaarin ama jarin.
Daaweynta ugu horreysa ee weligeed laga hortago indho beelida cudurka 'glaucoma' awgeed
Daaweynta ka hor, jiirarku waxay saameeyeen xaalad la mid ah gulukooma. Sababta indho-la’aanta ah oo ku dhacda cadaadiska isha oo ku riixaya neerfaha optic-ka kana horjoogsada inuu shaqeeyo.
Professor Huberman, oo ah madaxa cilmibaarista ka dambeysa daraasadda, ayaa sii sharraxay in illaa maanta, aragtida keliya loo soo celiyay bukaannadii ay saameysay cudurka cataracts, oo sida ugu wanaagsan loo yaqaan 'cataracts' - oo ah sababaha horseedda indho-la'aanta. Laakiin illaa iyo hadda, ma jirin daweyn aragti-dejinta loogu talagalay dadka aragoodu ku waayey gulukooma.
Cudurka 'Glaucoma' waa baaritaan xagga aragtida ah oo daran oo saameeya ilaa iyo 70 milyan oo adduunka oo dhan ah. Waxyeellada dareemeyaasha indhaha waxay u dhici kartaa sababo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan trauma, soo-go'idda xuubka maskaxda, buro buro, ama kansarka maskaxda.
Soo-gaadhis heer sare ah iyo ku takri-fal mayoolaji
Markaad wax fiiriso, runti waa iftiin ka tarjumaya waxa iyo deegaanka aad eegayso iyo ishaada. Halkaan, iftiinka wuxuu ku wajahan yahay lens isha ka hor inta uusan soconeyn waxaana fasiray sawir-qaadayaal ku yaalliin isha kore - unug khafiif ah oo unugyada ku yaal dhabarka isha.
Sawir qaadeyaashaani waxay markaa u gudbiya seenyaalaha ama macluumaadka iyagoo u maraya unugyada kale iyo marinnada dareemayaasha iyagoo maraya dareemayaasha indhaha - ka dibna waxay ku sii gudbiyaan fiilooyinka dareemayaasha khafiifka ah ee loo yaqaan 'axons' kuwaas oo fidiya oo taga qaybaha kala duwan ee maskaxda. Halkan waxay ku xirmaan dareemayaasha kale waxayna sameystaan ​​sawirka aan "aragno".
Waxa jira in kabadan 30 unug oo dareemeyaal ah oo kala duwan kuwaas oo tarjumaya qaybaha kala duwan ee macluumaadka aragga. Qaarkood waxay ku shaqeeyaan midabbo, kuwa kale waxay la shaqeeyaan dhaqdhaqaaqa iyo hawlo gaar ah.
Professor Huberman wuxuu sii sharraxayaa sida ay unugyada dareemayaasha laf-dhabarku u wada shaqeeyaan oo ay u sameeyaan waayo-aragnimo firfircoon oo muuqaal ah oo noogu digaya khatarta ama wixii la mid ah. Tusaale. Haddii gaari kugu yimaado xawaare aad u sareeya adiga, markaa unugyadaan dareemayaasha ah waxay ka caawin doonaan maskaxdaada inay tan kuu fasiraan inuu yahay mid khatar ah ka dibna waxay kugula talinayaan inaad guurto.
Unugyadan dareemeed waxay u diraan calaamadaha iyo macluumaadka laba iyo toban meelood oo maskaxda ah, kuwaas oo aan ku shaqeyn oo keliya aragtida, laakiin sidoo kale waxay saameeyaan niyaddayada iyo halka aan ku sugan nahay riwaayada maalinlaha ah.
In ka badan seddex meelood meel maskaxda ayaa u heellan inay tarjunto macluumaadka la xiriira aragtida iyo calaamadaha, laakiin kaliya unugyada dareemayaasha ee maskaxda ayaa ku xira maskaxda isha. Wuxuu kaloo raaciyay:
Haddii faallooyinka unugyadan la jaro, waxay la mid tahay jiidaha fiiqda ka baxaya. Xiriir malaha
Cilmi baadhayaashu waxay ogaadeen inay dib u soo nooleyn karaan dareemaha indhaha ee jiirarka iyagoo daaweynaya maalin kasta iyaga oo si deg deg ah u soo bandhigaya sawirada farqiga sare leh iyo / ama khalkhalgelinta biochemical - oo loogu talagalay in lagu soo nooleeyo dariiqa gaarka ah ee dareemayaasha ee aruurinta ganglions dareemayaasha indhaha.
Wadadani dareemayaasha ah waxaa loo yaqaan mTOR, waxayna cilmi baaristu horey u xaqiijisay inay kaalin muhiim ah ka ciyaarto horumarka maskaxda. Marka dariiqa neerfaha ee daciifka ah ama lumay - kaas oo dhacda da'da weyn - waxaad sidoo kale lumi doontaa dhowr muhiim oo ah is-dhexgalka kor u qaadida moodeka.
Saddex toddobaad oo daweyn ah kadib, indhaha iyo maskaxda jiirarka waa la baaray si loo arko haddii ay jiraan wax axon ah mar kale. Baarayaasha waxa ka badiyay natiijooyinka.
Labada qaybood ee daweynta waa lama huraan
Indho-indhaynta muhiimka ah ee daraasadda ayaa ahayd in inkasta oo faashaddii qumanka unugyada xubinta taranka ay burbureen markii neerfaha isha laga gooyo, unugyada photoreceptor iyo xiriirkooda unugyada wali wey shaqeynayeen.
Daraasadda ayaa sidoo kale muujisay in jiirarka helay qayb keliya oo ka mid ah daaweynta - ha noqoshada kicinta aragga ama maareynta xakameynta biokeetigga ee wadnaha neerfaha ee'TT '. Waxay ahayd isku-darka labada waxayna noqdeen go’aamiya isla markaana kiciyay hanaan dib-u-cusboonaysiin tiro badan oo axon ah. Faasashan ayaa markaa bilaabay inay sii koraan oo u guuraan qaybo ka mid ah maskaxda.
Tani waxay sidoo kale muujisay in faasaska ay dib ugu soo noqdeen meelihii ay ka yimaadeen - cilmi baarayaashu waxay is barbar dhig ku sameeyeen 'waxay u eg tahay in unugyadu leeyihiin GPS-kooda ay ku dhisan yihiin'.
Guul, laakiin xitaa ka sii fiicnaan kartaa
Daaweyntu waxay ahayd guul weyn, laakiin dib-u-hubin, waxay ogaadeen in qaybo ka mid ah aragtida wali maqan yihiin. Qeybta aragga ee mas'uulka ka ah faahfaahinta weli shaqeyneyn. Kooxdu waxay awood u yeelatay inay caddeyso in laba (in ka badan 30) axon oo ka socda unugyada ganglion retinal gaar ah inay dib ugu soo laabteen bartilmaameedyadoodii - laakiin ay ka maqnaayeen, waqtiga daraasadda, astaamo molecule ah oo u sheegi kara haddii axaska haray ay sidoo kale gaareen. Baarayaasha ayaa durbaba bilaabay daraasad cusub oo ay ka shaqeynayaan si loo wanaajiyo daaweynta.
Daraasad fantastik ah oo runtii horseed u ah daaweynta indho la'aanta ay keento glaucoma! Waxaan rajeyneynaa inaan la socono horumarada si dheeri ah. Tani waxay, muddo kadib, u horumarin doontaa daaweynta aragga oo wax ku ool u ah aadanaha sidoo kale. Waxaan rajeyneynaa oo kaliya in siyaasiyiintu doortaan inay u adeegsadaan ilaha dhaqaalaha cilmi baaris ay ku yeelan karto cawaaqib xumo dhaqan-dhaqaale - qiyaasi hadii kuwa indha la 'ay fursad u heli karaan inay markale si buuxda u shaqeeyaan? La wadaag maqaalka baraha bulshada si aan kor ugu qaadno diiradda aan ku leenahay cilmi baarista noocan ah!
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan asxaabtaada, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan. Haddii aad rabto maqaallo, jimicsi ama wixii la mid ah oo loo soo diro dukumiinti ahaan ku celcelin iyo wax la mid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, si toos ah uga faallood maqaalka ama si aad noola soo xiriirto (gebi ahaanba bilaash ah) - waxaan ku dadaalaynaa sidii aan kuu caawin lahayn.
Sidoo kale aqri: - 6 Calaamadaha Hore ee ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
Sawirada: Wikimedia Commons 2.0, Hal abuurka Commons, Freemedicalphotos, Freestockphotos iyo tabaruca akhristaha ee la gudbiyey.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/glaukom.jpg?media=1648573622 417 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-21 09:17:202022-03-18 17:26:39Saynisyahannada ayaa dib ugu soo celiyay aragtida ku jirta jiirka indhaha markii ugu horreysay!
- Macaaneeye dabiici ah: Jid dhakhso leh oo miisaanka culus leh? 6 Layliyo loogu talagalay Xanuunka Dhabarka ee Hoose ee Aad u Xun